၅ သိန်းတန်ဖုန်း ကြံ့ဖွံ့များကို ဈေးလျှော့ ပေးမည်….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ၅ သိန်းတန်ဖုန်း ကြံ့ဖွံ့များကို ဈေးလျှော့ ပေးမည်…..
၅ သိန်းတန်ဖုန်း ကြံ့ဖွံ့များကို ဈေးလျှော့ ပေးမည်…..
Posted by Juemyit on Aug 12, 2010 in Myanma News, News | 8 comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ. Forward mail လေးပါ….
CDMA2“ဖုန်းလိုင်း ကျပ်တာတွေ မဖြစ်အောင် တိုးချဲ့ပေးတာလို့ ပြောပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စခန်းတွေဆောက်ပြီး ထပ်ရလာမယ့် လိုင်းအရေအတွက် ၁ သိန်းကို သွင်းဈေး ၅ သိန်း အစား ၂ သိန်းနဲ့ သူတို့ ပါတီဝင်တွေ အတွက် ချပေးသွားမှာလို့ သိရတယ်” ဟု မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း CDMA 800 MHZ ဖုန်းလိုင်း ၁ သိန်းအတွက် ဆက်သွယ်ရေးစခန်း ၄၂ ခု ထပ်မံတိုးချဲ့ တည်ဆောက်မည်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုထားသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြည်သူလူထု လိုအပ်ချက်ကို အဓိကထား ဖြည့်ဆည်းပေးကာ မဲရရှိရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း စစ်အသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
“မန္တလေးမှာဆို မြို့တော်ဝန်က လမ်းခင်းပေး၊ ရေတွင်းတူးပေးပြီး မဲဆွယ်တာတွေ လုပ်ကြသလို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေချပေးပြီး စည်းရုံးတာမျိုးပေါ့။ ဌာနအလိုက် ၀န်ကြီးတွေ ဦးဆောင်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအတွက် မဲဆွယ် စည်းရုံးတာတွေ အဓိက လုပ်တာ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှု ပြုလုပ်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ ထုတ်ပြန်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ အခန်း (၃)၊ အပိုဒ် ၁၂ (က) ၅ အရ နိုင်ငံတော်ပိုင် ငွေကြေး၊ မြေ၊ အိမ်၊ အဆောက်အအုံ၊ ယာဉ်၊ ပစ္စည်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ရယူသုံးစွဲကြောင်း တွေ့ရှိပါက ပါတီအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် ဥပဒေကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ချိုးဖောက်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။
“၅ သိန်းတန်ဖုန်းတွေ ဒီလောက် ချမပေးခင်ကတည်းက ပါတီဝင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့လူက လျှောက်ပေးတယ်ဆိုရင် လျှောက်ရလွယ်ပြီး မြန်မြန်ရတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။အငြိမ်းစား အရာရှိကြီးတဦးက “၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းလောက်ကစပြီး အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေကို ဖုန်းလိုင်းတွေ ချပေးတာ၊ ဌာနက ရာထူးကြီးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ကားပေးထားတာ။ ဒါတွေက နအဖရဲ့ စည်းရုံးနည်းတွေပဲ။ အခုလည်း ဒီလို စည်းရုံးတဲ့ သဘောပဲ။ သူတို့လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက တရားမျှတတယ်ဆိုရင် ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ မဲဆွယ်တာတွေ မလုပ်ဘဲ တရားနည်းလမ်းကျကျ ပြိုင်သင့်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
ကျပ် ၅ သိန်းတန် CDMA 800 MHZ ဖုန်းလိုင်းသည် GSM နှင့် ဆယ်လူလာဖုန်းများထက် ဈေးနှုန်းသက်သာခြင်း၊ လျှောက်ရ လွယ်ကူခြင်း၊ လိုင်းကြည်လင်ခြင်းတို့ကြောင့် သုံးစွဲမှု ပိုများလာကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှ ဇူလိုင်လကုန်အထိ CDMA 800 MHZ ဖုန်း ချထားပေးသည့် အရေအတွက် ၁ သိန်းခွဲ ရှိပြီဟု သိရသည်။CDMA 800 MHZ ဖုန်းများကို ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင်သော Central Marketing ကုမ္ပဏီနှင့် စစ်အစိုးရတို့ ပူးပေါင်းကာ ၂၀၁၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှ စတင်ပြီး ချထားပေးခဲ့သည်။ယင်းကဲ့သို့ ၅ သိန်းတန်ဖုန်းလိုင်း ချထားပေးမှု များပြားသောကြောင့် GSM ဖုန်းလျှောက်ထားမှု နည်းပါးလာခြင်း၊ GSM ဖုန်း များနေရာတွင် CDMA 800 MHZ ဖုန်းများကို လဲလှယ်သုံးစွဲလာကြခြင်း၊ တယ်လီဖုန်း အငှားဈေးကွက် လျော့ကျလာခြင်းများ ရှိကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ တယ်လီဖုန်း ရောင်းချ၊ ငှားရမ်းသည့် ဈေးကွက်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဆက်သွယ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ တဦးက “ဆက်သွယ်ရေး စခန်းတွေ တည်ဆောက်တာနဲ့ အပြိုင် တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ ချဲ့တဲ့နေရာမှာ ပိုက်ဆံပိုရရင် ပြီးရောဆိုပြီး အလွန်အကျွံ ချမပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီလိုဆို ထပ်တိုးလာမယ့်လိုင်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် စခန်းအင်အားမမျှဘဲ ဆက်သွယ်ရေး စနစ်တွေ ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားသင့်တယ် ” ဟု ဆိုသည်။အစိုးရ၀န်ထမ်း အများစု သုံးစွဲသည့် ဆယ်လူလာဖုန်း ခေါ်ဆိုခမှာ ၂၅ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ၅ သိန်းတန်ဖုန်းနှင့် GSM မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ ခေါ်ဆိုခမှာ တမိနစ်လျှင် ၅၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် လက်ရှိ စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးသိန်းစိန်နှင့် အစိုးရ၀န်ကြီး၊ အရာရှိကြီး၂၆ ဦးတို့သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့၌ ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ကျထားသည်။USDP သည် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ပါတီဝင်အင်အား တင်ပြသည်ကို ယနေ့အချိန်အထိ မတွေ့ရှိရသေးပေ။
အဲဒီဖုန်းကို ပြည်ထောင်စုဖုန်းလို့ခေါ်တာဆိုရင်..နိုင်ငံခြားကနေ အဲဒီဖုန်းကို ဘယ်လိုလှမ်းခေါ်လို့ရသလည်း သိသူတွေနည်းလမ်းပေးပါဦးခင်ဗျ..။
လိုင်း သေသေချာချာမမိဘူးပြောကြတာေ၇ာ ဟုတ်ပါသလား…။??
The Junta is doing all kind of dirt tricks to get party members and obviously aiming to get voters at polling stations. Burmese people should take care of their daily necessities such as food, cloth and shelters asabasic needs. The junta is using the electricity and water supply to bribe the public in return for installing military rule by means of fake election. I like to remind the people that it is mainly to bribe you all. If they really have the loving kindness towards the general public, why din`t they help the victims of Cyclone Nargis when the disaster needed international and national coordinated rescue efforts? Why did they block the relief works of local and international rescuers? Why? It is because of Junta`s deep hate of people. I had seen on TV about the relief works on Pakistan`s flood. The transport planes landed on the runways to unload the millions of foods, tents, blankets, and medicines from overseas governments and donors. The government could not reach the remote areas to feed the victims. The reporter said that the group giving3free mealsaday for victims are related to terrorist sympathizers in Pakistan. They fear that people could turn into terrorist sympathizers and supporters. But in this time of post-flood starvation, neither Pakistani government nor America could block the terrorist sympathisers` relief works. I am giving this example of kind governments` tolerance towards the danger posted by this relief works. Here is another reason to boycott the election. Are we forgetting the fallen soldiers of 8888? What would these martyr feel when you assist the Junta by going to polling station? If you vote on the election day, no matter what you vote, it will become military`s vote by Than Shwe`s magic. Martyr would never forgive you for assisting the devil who butchered our fallen leaders to death. So if you still remember the spirit of 8888, DO NOT VOTE IN ELECTION. take all the sweet given by crooks but BOYCOTT>
ကျနော်ကတော့ ဖုန်းဘယ်သူကိုချပေးတယ်မပေးထက်ဆိုတာထက် ဒီ GSM ဖုန်းတွေစပေါ်စကတည်းက အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ဘဲ ပြန်ရောင်းစားလို့ရအောင်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုက မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
လူတွေအားလုံးက ပါတ်သက်ဆက်စပ်သူရော မပါတ်သက်သူရောမလိုအပ်ပေမယ့်ရောင်းစားရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုထဲနဲ့ဖုန်းတွေကို
တောင်းကြ လျှောက်ကြ ရောင်းစားကြနဲ့အောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြပါတယ်။
အရင်က ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ်ကိုစာအုပ်ရှိတဲ့သူကိုရောင်းတယ်။
အခု ဓါတ်ဆီ ဒီဇယ် ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မရှိဘဲရောင်းတယ်။
မန်းလေးက ဓါတ်ဆီဆိုင်မှန်သမျှမှာ စီးမရတဲ့ဆိုင်ကယ်အစုတ်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လို့ တိုးရောင်းစားနေကြတာကို
သူတို့လိုမတိုးနှိုင်တဲ့ တကယ်သုံးမယ့်သူက ဘေးထွက်နေရတယ်။
မြန်မာ့ဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတော့..ဆိုရှယ်လစ်နို့နံ့ မစင်သေးတဲ့ ဈေးကွက်လို့မြင်ပါတယ်။
ပိုင်ရာဆိုင်ရာတွေနဲ့လိုက်ပြီး လိုင်စင်ချပေးပြီး ရလာမှ ပစ္စည်းကို တန်ဖိုးတခုရှိတယ်ထင်တဲ့စိတ်အခြေခံပါတယ်ပြောချင်တာပါ။
အဲဒီမှာ မသိစိတ်ထဲက ဂုဏ်ယူစိတ်ကလေးကပ်ပါလာနေပါတယ်။
ဒါကို သေသေချာချာနားလည်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေက အားလုံးအလွယ်တကူပေးနိုင်ရက်နဲ့ အတားအဆီး (လိုင်စင်၊ပါမစ်)တခုထားပြီး စားသုံးသူကို တိုက်ရိုက်မပေပဲ ….ဈေးကစားတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီစိတ်ဓါတ်ရေးရာကို သေသေချာချာသိနားလည်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရပိုင်းကလည်း အာဏာသုံးပြီး ဈေးကွက်ကို ကိုင်ချည်နှောင်ပေးပါတယ်။
ဲအခွင့်အေ၇းခံစားခွင့် နဲ့ အခွင့်ထူးခံအာဏာ၇ှိ လူတန်းစားနှစ်၇ပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအ၇ိုးစွဲအောင်၇ှိနေပြီဆိုတာပါဘဲ။ တက်လာသမျှအစိုး၇ကဒီအခွင့်အေ၇း ကိုလက်လွတ်မခံသလို လူထုကလည်းဒီသံသ၇ာမှာကျင်လည်နေ၇တာကြာပါပကော။
ဗိုလ်ိနေ၀င်းဖန်တီးခဲ့တဲ့ monsters တခုပါ။
ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ .. ဟိုအရင် ပါတီစုံခေတ်ကလဲ .. လိုင်စင်တော်ရမင်း ဆိုတာ ရှိခဲ့သလို .. အခုခေတ်မှာလဲ လိုင်စင်ချသူ .. လိုင်စင် ရသူ .. လိုင်စင် ရောင်းသူ .. လိုင်စင် တဆင့်ပြန်ဝယ်သူ .. နောက် ထပ်ဆင့်ရောင်းသူ .. နောက် ထပ်ဆင့်ထပ်ဆင့် ရောင်းသူ .. နောက်ဆုံးမှ အမှန်တကယ် သုံးစွဲမယ့်သူ ဆိုတော့ ..
နောင်လဲ ရှိနေဦးမှာလား .. ဟို ပုံပြင်ထဲကလို .. နောက်လူလဲပဲ .. (ကြောက်ကြောက်)
ဒါက တိုးတက်မူတစ်ခုလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ သင်တို့ ဘေးက နိုင်ငံတွေကို ကြည့်ပြီး နိုင်ငံကို မကြည့်ပါနဲ့။
အဲဒီ တိုးတက်မူက နည်းနည်းများ နောက်ကြနေသလားလို့???